Telegram dia manafoana ny ICO nanangona 1,7 miliara | Vaovao momba ny gadget
Telegram dia nanafoana ny ICO taorian'ny nanangonana 1,7 miliara dolara
Fotoana vitsy lasa izay Telegram dia nanambara ny fidirany amin'ny tsenan'ny cryptocurrency miaraka amin'i Gram. Mba hanombohana ity tetikasa ity dia nanangana ICO (fanolorana vola madinika voalohany) ny orinasa. Hatreto dia fahombiazana niavaka tamin'ny vola mitentina 1,7 miliara dolara. Fa ny orinasa dia nanapa-kevitra ny hanafoana an'io ICO tampoka io.
Satria tsy nisy nanampo an'ity fanapaha-kevitra nataon'ny Telegram ity, kely kokoa ny mpampiasa vola. Toa ny antony nanafoanana an'ity ICO ity dia satria nanangona vola be tamin'ny orinasa tsy miankina samihafa ny orinasa. Ka tsy mila mampiasa an'io endrika fanangonana io intsony ianao.
Farafaharatsiny izany no notaterin'izy ireo avy amin'ny haino aman-jery samihafa any Etazonia. Saingy ny Telegram mihitsy tsy mbola nahita fanehoan-kevitra hatreto. Ka tsy maintsy hiandry fotoana kely isika vao hahalala ny tena anton'io fanafoanana io.
Tamin'ny fihodinana voalohany natao tamin'ny volana Febroary, ny orinasa dia nahazo 850 tapitrisa dolara tamin'ny 81 mpampiasa vola samihafa. Anisan'ireny no ahitantsika ny orinasa renivohitra toa an'i Sequoia Capital na Benchmark. Ny fihodinana faharoa dia natao tamin'ny volana martsa, ary tao koa izany nahazo 850 tapitrisa izy ireo, amin'ity tranga ity avy amin'ny mpampiasa vola 94 samihafa.
Ka ny orinasa dia nanangona 1,7 miliara dolara tamin'ny 175 mpampiasa vola samihafa. Hanao ahoana ny vola azo? Toa hampiasaina amin'ny tetikasa Telegram Open Network izy io. Noho ity tetik'asa ity dia hitohy hamatsy vola ny fampiharana fandefasan-kafatra ary hampiditra asa vaovao ao aminy.
Toa, Telegram dia tsy mila mihoatra ny 1,7 miliara hananganana sy handefasana ny Telegram Open Network. Raha ny marina, ao anatin'ny telo taona manaraka dia mikasa ny handany 400 tapitrisa $ fotsiny ilay orinasa. Ka amin'ny vola efa azony dia azony atao ny manafoana ity ICO ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Telegram dia nanafoana ny ICO taorian'ny nanangonana 1,7 miliara dolara
Samsung PRO Endurance, karatra SD avo lenta
LG G7 ThinQ, ilay sainam-pirenena izay miloka ihany koa amin'ilay Notch malaza